Umdwebo kaVasetsov "Bogatyri" namhlanje uyaziwa ezinganeni zanamuhla ngaphezu kwamanye, ngenxa yezizathu zawo. Izingane, nabantu abadala, benenjabulo ukubukela ama-adventures esikrini e-Alesha Popovich, i-Ilya Muromets eqinile namasiko, ahlakaniphile uDobrynya Nikitich. Abantu abambalwa bayayazi indaba yomdwebo. Njengoba nje abantu abambalwa bacabanga ngencazelo yangempela yesithombe namhlanje.
Amagama ambalwa ngomlando womqondo
Isithombe "Bogatyri" Vasnetsov yisidalwa sakhe esikhulu kunawo wonke (ubukhulu bomdwebo ngu-295x446 cm) futhi okwesikhashana (umculi wabhala iminyaka engaba ngu-20), nasemlandweni. Amaqhawe ahlanganisa lonke elaseRussia lasendulo kanye nokuhlukahluka kwezindawo zalo, uthando lwabo ngezwe labo bomdabu kanye nokulungela kwabo ukuvikela i-Motherland. Incazelo yesithombe "Bogatyri" Vasnetsov, enikezwe ngumculi ngokwakhe, izwakala elula kakhulu. Encwadini yakhe eya ku-PP Chistyakov, ubonisa kuphela ukuthi iziqhawe ezintathu eziyinhloko zaseRussia zisensimini futhi ziqaphele ukuthi kukhona yini isitha lapho, noma uma engacasuli muntu. UVasetsov uchaza izimo zamaqhawe. U-Ilya Muromets, omdala, ubheka ibanga, ehlanganisa amehlo akhe ngesandla sesandla sakhe. Unamandla kakhulu, izaziso ezibukeleyo zokubheka ukuthi induku enkulu ekulenga esandleni sayo ibonakala kulula. Ngakolunye uhlangothi i-hero epicile iphethe umkhonto. Mayelana nokuzimisela kukaDobryny Nikitich (washiya) ukuba asheshe agijime empini ukufakaza inkemba, isigamu esithathwe emgodleni wayo. Young and mncane uma kuqhathaniswa nezinye Alyosha Popovich uhlomile ngomnsalo nemicibisholo. Umdwebo weVasetsov "Bogatyri" ubhalwe sengathi umdwebi ubheka abalingiswa bakhe kancane kusuka ngezansi. Le nqubo ivumela umbhali ukuba adlulisele ubukhosi, amandla namandla wamagama abalulekile abakhulu be-Epic yaseRussia.
Kodwa lo mdwebi uphatha kanjani ukuveza isimo sesingozi, okukhalayo esithombeni?
Isithombe sikaVasetsov "Bogatyri" sibonisa ukuthi umhlaba odwetshwe ngumculi uhambelana kanjani nemimoya yamaqhawe.
Umoya wawa utshani utshani obunamahlathi kanye namazinyo amahhashi. Ifufu, inesabekayo, ngamafu egijima kuwo, isibhakabhaka sigcizelela isimo samaqhawe alindele ingozi.
Isimo sokukhathazeka nenyoni yezilwane ezihamba esibhakabhakeni, kanye nomhlaba oshisayo ngelanga elimnyama, ngaphansi kwezinselo zamahhashi, ugcwalise isimo se-alamu. I-landscape ibonakala ingokomoya. Isithombe sikaVasetsov "Bogatyri" sibonisa ubunye bukaRusich. Ngolunye uhlangothi, unzalamizi wezwe ungumdabu wabantu abavamile, u-Ilya Muromets, indodana yompristi u-Alesha, ummeli wamasiko futhi "azi" ingxenye yabantu baseDobrynia. Owokuqala, ogcwele "ubuhle kanye nemvelo enhle" uhlukaniswa ngamandla okuzethemba, ukuthula, isipiliyoni sempilo. U-Alyosha, osemusha, onesibindi, oyisunguli esikhulu nesigqoko se-shirt, egcwele isibindi, amehlo akhe ashisa ngesibindi. Izici ezicashile, ezisezingeni eliphezulu zeDobryni zikhombisa imfundo yakhe, isiko. Ebusweni kubonakala, ukuthi idiplomate uDobrynia idinga ingqondo futhi ilungele ukwenza imisebenzi enzima kakhulu. Okumangalisayo, ohloniphekile futhi ngesikhathi esifanayo esinamandla, amaqhawe amathathu ayingqayizivele afaka amandla abantu baseRussia, amandla nobukhulu babantu.
Umculi odume kakhulu emhlabeni - ungubani?
"Abathunywa." Abadlali be-Panror Brothers
Racing umshayeli Nick Heidfeld: Biography, imiphumela, izibalo kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Umsuka kwabantu isinyathelo anthropogenes
Evgeny Alekhin: Biography nemisebenzi
Yini okufanele ibe isakhiwo isiginci